UTORRENT: NJEHIE, ỤDA NA-AGA N'IHU ADỊGHỊ ETINYE - UTORRENT - 2019
Kọmputa nwere ọtụtụ ihe metụtara ya. N'ihi ọrụ nke onye ọ bụla n'ime ha, ọrụ usoro ahụ kwesịrị. Mgbe ụfọdụ enwere nsogbu ma ọ bụ kọmputa amalitela, na nke ikpe ị ga-ahọrọ na melite ụfọdụ components. Iji nwalee PC maka malfunctions na nkwụsi ike nke ọrụ ga-enyere mmemme pụrụ iche, ọtụtụ ndị nnọchianya anyị tụlere n'isiokwu a.
Usoro PCMark dị mma maka ịnwale kọmputa nke ụlọ ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ederede, ndị editọ ederede, ihe nchọgharị, na ngwa dị iche iche dị mfe. N'ebe a, e nwere nyocha dịgasị iche, onye ọ bụla n'ime ha na-enyocha site n'iji ngwaọrụ ndị e wuru rụọ, dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị weebụ na-agba ọsọ ma ọ bụ nchịkọta na-eme na tebụl. Ụdị ego a na-enye gị ohere ịchọta otú nhazi na vidiyo ga-esi nagide ọrụ ọ bụla nke onye ọrụ ụlọ ọrụ.
Ndị mmepe na-enye nsonaazụ nke nyocha zuru ezu, nke na-egosiputa ọ bụghị nanị nkezi ihe ngosi njirimara, kamakwa nwere njikọ kwekọrọ na ya, oge okpomọkụ na ugboro ugboro nke components. Maka ndị na-egwu egwuregwu na PCMark, ọ bụ naanị otu n'ime nhọrọ anọ maka nyocha - a na-arụ ọrụ dị mgbagwoju anya ma na-arụ ọrụ dị mma na ya.
Dacris Benchmarks bụ usoro dị mfe ma dị ezigbo mkpa maka ịnwale ngwaọrụ kọmputa ọ bụla. Ikike nke software a gụnyere nyocha dị iche iche nke nhazi ahụ, RAM, diski ike na kaadị vidiyo. A na-egosipụta nsonaazụ ule na ihuenyo ozugbo, wee chekwaa ma dị maka nlele n'oge ọ bụla.
Na mgbakwunye, windo ahụ na-egosiputa isi ihe ọmụma banyere components ndị arụnyere na kọmputa ahụ. Nlebara anya nke onye ọ bụla kwesịrị ịnwa ule zuru ezu, nke ule nke ngwaọrụ ọ bụla na-ewere ọnọdụ n'ọtụtụ nkebi, ya mere, ihe ga-esi na ya pụta bụrụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi dịka o kwere mee. A na-ekesa Dacris Benchmarks maka ego, ma akwụkwọ ikpe ahụ dị maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ nke onye mmepụta n'efu.
Download Dacris Benchmarks
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta arụmọrụ na ọnọdụ nke nhazi ahụ, mgbe ahụ, ihe omume Prime95 ga-abụ nhọrọ dị mma. Ọ nwere ọtụtụ nsogbu CPU dị iche iche, tinyere nyocha nrụgide. Onye ọrụ ahụ adịghị achọ nkà ọ bụla ma ọ bụ ihe ọmụma ọ bụla, o zuru ezu ịtọ ntọala ndị dị mkpa na ichere ka usoro ahụ mechaa.
A na-egosipụta usoro ahụ n'onwe ya na windo ihe omume mmemme na ihe ndị mere n'oge, ihe gosipụtara na windo dị iche, ebe a kọwara ihe niile n'ụzọ zuru ezu. Ihe omume a na-ewu ewu karịsịa na ndị na-ekpuchi CPU, n'ihi na ule ya zuru oke dị ka o kwere mee.
A na-eche Victoria nanị maka nyochaa ọnọdụ anụ ahụ nke diski ahụ. Ọrụ ya na-agụnye ule ala, omume na ndị na-adịghị mma, nchọpụta zuru oke, ịgụ akwụkwọ paspọtụ, ule ala, na ọtụtụ ihe dị iche iche. Ndabere bụ nchịkwa siri ike, nke nwere ike ịdaba na ike nke ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ.
Ihe na-adịghị ike gụnyere gụnyere enweghị asụsụ Russian, njedebe nkwado site n'aka onye mmepụta ahụ, interface na-adịghị mma, na nyocha ndị a adịghị adịcha mgbe niile. A na-ekesa Victoria n'enweghị ụgwọ ma dị maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye mmepụta.
Otu n'ime ihe omume ndị a ma ama na ndepụta anyị bụ AIDA64. Kemgbe ụbọchị nke ochie, ọ na-enwe ọtụtụ mgbasa ozi n'etiti ndị ọrụ. Ngwaọrụ a dị mma maka nyochaa ihe niile components nke kọmpụta ma duzie ule dị iche iche. Ihe kachasị mkpa nke AIDA64 karịrị ndị asọmpi bụ inweta ozi zuru ezu banyere kọmputa.
Maka ule na nchọpụta nsogbu, enwere otutu diski, GPGPU, nyocha, nhazi usoro, mkpuchi, na nchịkọta nchekwa. Site n'enyemaka nke ule ndị a nile, ị nwere ike ịchọta ozi zuru ezu gbasara ọnọdụ nke ngwaọrụ ndị dị mkpa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta nkọwa zuru ezu nke kaadị vidiyo, FurMark dị mma maka nke a. Ike ya gụnyere nyocha nhụsianya, ọkwa dị iche iche na ọrụ GK Shark, nke na-egosiputa ozi zuru ezu gbasara onye ntanetị arụnyere arụnyere na kọmputa.
Enwekwara ọkụ CPU, nke na - enye gị ohere ịlele nhazi maka ikpo ọkụ. A na-eme nnyocha ahụ site n'iji nwayọọ nwayọọ na-amụba ibu. A na-echekwa ihe nchoputa niile na nchekwa data ma ga-adị maka nlele.
Nnyocha nyocha arụmọrụ
Ezubere nyocha arụmọrụ kpọmkwem maka nyocha zuru ezu nke ngwanrọ kọmputa. Usoro ahụ na-enyocha ngwaọrụ ọ bụla site na iji ọtụtụ algọridim, dịka ọmụmaatụ, a na-enyocha processor maka ike na mgbagwoju anya, mgbe ị na-atụle physics, mgbe ịchọta na mkpakọ data. E nwere nyocha nke otu isi ihe nhazi, nke na-enye ohere inweta ihe nrite nyocha kacha mma.
Maka ihe ndị ọzọ nke PC, mgbe ahụ, ha na-arụkwa ọtụtụ arụmọrụ na-enye gị ohere ịgbakọ ike na arụmọrụ kachasị na ọnọdụ dị iche iche. Usoro ihe omume ahụ nwere ọbá akwụkwọ ebe ọ bụla a na-echekwa ihe niile nchoputa. Window isi na-egosiputa ozi nkenke maka akụrụngwa ọ bụla. Ọmarịcha nyocha ọgbara ọhụrụ nke ntaneti arụmọrụ na-adọrọ uche gaa n'usoro ihe omume ahụ.
Download nyocha ọkpụkpọ arụmọrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa, na-enweghị ịlele nyocha zuru oke, nweta atụmatụ nke steeti ahụ, mgbe ahụ usoro Novabench bụ maka gị. N'aka nke ya, ọ na-eduzi nyocha nke onye ọ bụla, mgbe e mesịrị, a na-agbanwe mgbanwe gaa na windo ọhụrụ ebe a gosipụtara atụmatụ ndị a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ụkpụrụ ndị a nwetara ebe, mgbe ahụ, ịkwesịrị iji ọrụ mbupụ, ebe ọ bụ na Novabench enweghị ụlọ akwụkwọ ọbọpụtara na ihe ndị a zọpụtara. N'otu oge ahụ, ngwanro a, dị ka ọtụtụ n'ime ndepụta a, na-enye onye ọrụ na usoro ihe ọmụma dị elu, ruo na mbipụta BIOS.
Sandra SiSoftware na-agụnye ọtụtụ ọrụ ndị na-enyere aka ịchọpụta kọmputa. N'ebe a, e nwere otu nyocha nke benchmark, nke ọ bụla n'ime ha ga-agba ọsọ iche. Ị ga-enweta nsonaazụ dị iche iche n'oge niile, n'ihi na, dịka ọmụmaatụ, onye nhazi ahụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa na arụmọrụ aha, ma ọ na-esiri ya ike ịpụta data multimedia. Nkewa a ga - enyere aka nyochaa nke oma, chọputa ike na ike nke ngwaọrụ.
Na mgbakwunye na ịlele kọmputa gị, SiSoftware Sandra na-enye gị ohere ịhazi ụfọdụ usoro ntọala, dịka ọmụmaatụ, gbanwee fonti, jikwaa ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere, plugins, na ngwanrọ. A na-ekesa usoro a maka ego, yabụ tupu ịzụrụ anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na mbipute ikpe ahụ, nke nwere ike ibudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Ihe kachasị ọhụrụ na ndepụta anyị bụ ihe omume si Futuremark. 3DMark bụ software kachasị ewu ewu maka ịlele kọmputa n'etiti ndị na-egwu egwuregwu. O yikarịrị ka nke a bụ n'ihi nha nha nke ike nke kaadị vidiyo. Otú ọ dị, ebumnuche nke usoro ihe omume ahụ dị ka ihe atụ na ihe egwuregwu. Banyere arụmọrụ, enwere ọtụtụ nchịkọta dị iche iche, ha na-anwale RAM, ihe nhazi na kaadị vidiyo ahụ.
Usoro mmemme ahụ bụ ihe omimi, usoro nyocha ahụ dịkwa mfe, ya mere, ọ ga-adị nnọọ mfe maka ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ iji nweta ntụsara ahụ na 3DMark. Ndị nwere kọmputa ndị na-adịghị ike ga-enwe ike ịgabiga ezigbo ule nke ngwaike ha ma nweta ozugbo banyere ọnọdụ ya.
N'isiokwu a, anyị nyochara ndepụta nke mmemme ndị na-anwale ma chọpụta kọmputa. Ha niile dị otu ihe ahụ, ma ụkpụrụ nke nyocha maka onye nnọchiteanya ọ bụla dị iche, ọzọkwa, ụfọdụ n'ime ha na-ahụ maka naanị ihe ụfọdụ. Ya mere, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị jiri nlezianya nyocha ihe niile iji họrọ ngwaọrụ kachasị mma.